09. Al-baqarah 154 - 176
Ciidamada amaanka ee maamulka Jubba oo gacanta kusoo dhigay rag looga shaki qabo inay xiriir la leeyihiin Al-shabaab iyo waxyaabaha qarxa.
on September 22 2013 Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in howlgalo ay maanta halkaasi ka sameeyeen ciidamada amaanka ee magaaladaasi ayaa waxay kusoo qabqabteen waxyaabaha qarxa iyo rag lagu tuhmaayo inay xiriir la leeyihiin Xarakada Al-shabaab.
Maxamed Cabdi Buule oo ah taliyaha amaanka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ciidanka amaanka ee maamulka Jubba ay howlgalo saf balaaran maanta ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaladaasi, ka dib markii ay ka warheleen xogo ku saabsan arimaha amaanka ee halkaas.
Taliyaha amaanka ee Kismaayo ayaa sidoo kale sheegay in ciidankaasi ay howlgalada kusoo qab qabteen waxyaabaha qarxa iyo sidoo kale 6 qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin Xarakada Al-shabaab.
Wuxuu sheegay inay talaabo adag ka qaadi doonaan dadka ay howlgalada kusoo qab-qabteen, islamarkaana ay baaritaano ku sameeyn doonaan waxyaabaha qarxa oo ay gacanta kusoo dhigeen.
Ciidamada amaanka ee maamulka Jubba ayaa waxay tan iyo markii magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose qarax lagula eegtay kolonyo gaadiid ah ee uu la socday gudoomiyaha maamulkaasi Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Sheekh Axmed Madoobe) waxay ciidamadaasi ka bilaabeen halkaasi howlgalo amaan sugid ah islamarkaana lagu soo qab-qabanaayo dadka lala xiriirinaayo Al-shabaab.